Friday January 04, 2019 - 08:24:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad utababaran oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa saaka magaalada Muqdisho ku khaarijiyay mas'uul sare oo katirsanaa maamulka gobolka Banaadir.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogag hubeysan ay degmada Wardhiigleey ku dileen Col.Macallin Daahir oo ahaa taliyaha Booliska degmada islamarkaana kamid ahaa mas'uuliyiinta guddiga ammaanka gobolka Banaadir.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayay ku sheegtay mas'uuliyadda weerarkan qorshaysan ee lagu dilay taliyihii booliska degmada Wardhiigleey.
"Mujaahidiinta ayaa howlgal qorsheysan ku dilay taliyihii Booliska kooxda Ridada ugu magacaawnaa degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in xoogagii falka dilka ah ay si nabad gelya ah goobta uga dhaqaaqeen, Korneel Macali Daahir ayaa kamid ahaa saraakiisha ugu caansan booliska gobolka Banaadir wuxuuna caan ku ahaa in uu hoggaamiyo howlgallada raafka ah ee ka dhan ah shacabka degmada Wardhiigleey.
Isbuucan sii dhammaanaya gudihiisa ayay aheyd markii Al Shabaab ay taliye sare oo katirsanaa melleteriga dowladda Federaalka ay ku dishay degmada Waaberi ee isla magaalada Muqdisho, bishoo November weerar ka dhacay Hotelka saxafi waxaa ku dhintay taliyihii Booliska degmada Hodon.